Nuxurka hurdada, Daaweynta Copd, Cudurka neefsashada - Micomme
OH-70C Qulqulka Qulqulka Xawaaraha Sare ...
i Hawo-aan-fidin ahayn Hawo…
Micomme Medical Technology Development Co., Ltd. waa shirkadaha ugu horeeya ee Shiineys ah oo diirada saaraya aaladaha caafimaad ee xanuunka hurdada iyo xalka neefsashada. Waxaan si xamaasad leh ugu soo dhaweynaa xalka u horseeda daryeelka guriga iyo isbitaal leh astaan ​​sumadeed 'Sepray' oo ku saabsan cudurka neef-mareenka. Waxaan si joogto ah u bixinnaa habka sayniska, raaxada iyo habka daaweynta dabiiciga ah ee dhakhaatiirta iyo bukaannada ku jira hurdada adduunka iyo suuqa neefsashada.
Nidaamkeenna is-horumaray ee M + Health Care Platform wuxuu awood u leeyahay inuu falanqeeyo waqtiga-dhabta ah
Wargeysyadeena, macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan alaabadayada, wararka iyo dalabyada qaaska ah.
Had iyo jeer tayada saar meesha ugu horeysa oo si adag u ilaali tayada sheyga ee geedi socod kasta. Waxaan ka gudbinay shahaadada maareynta tayada tayada ee ISO9001 iyo nidaamka aaladda tayada tayada ee ISO13485.
Shahaadada CE waxaa soo saaray TÜV SÜD, oo ah hay'ad caan ah oo ku dhawaaqday Jarmalka, taas oo tilmaamaysa in shirkadda tikniyoolajiyadda iyo nidaamka tayada ee shirkadda ay aqoonsadeen mas'uuliyiinta caalamiga ah. Waxaan sidoo kale si guul leh u helnay diiwaangelinta iyo shahaadada NMPA (CFDA ee Shiinaha).
Qalabka hawo-hawo ee soo-saareyaasha aan-baahinta lahayn ku dhawaad ​​8 sano. Warshadeena waxay ku taalaa Changsha, Shiinaha.
Daaweynta COPD ee Cisbitaalka
Daaweynta Humidification Therapy
Daaweynta COPD ee qoyska
Mashaariicda Cilmi Baadhista Sayniska
Wadashaqeynta wadamada iyo gobolada
La dagaallanka COVID-19, Micomme adiga ayaa kula jooga
La dagaallanka COVID-19, Micomme oo ay weheliyaan adiga Shirkado ka socda Shiinaha ...
Soosaarayaasha hawada ee Shiinaha ayaa kor u qaada wax soo saarka dagaalka caalamiga ah ee ka dhanka ah cudurka faafa ee COVID-19
Soosaarayaasha hawada ee Shiinaha ayaa kor u qaada wax soo saarka dagaalka caalamiga ah ee ka dhanka ah masiibada COVID-19 Iyadoo ay sii kordhayaan baahida shisheeye inta lagu jiro cudurka COVID-19, soosaarayaasha hawada ee Shiinaha ayaa sii kordhaya p ...
Si loo taageero bulshada deegaanka oo si firfircoon uga qaybqaato waxqabadka tabaruca ee Ururka Laanqayrta Cas ee Gobolka Hunan
Si loo taageero bulshada maxalliga ah oo si firfircoon uga qaybqaato waxqabadka tabaruca ee Ururka Laanqeerta Cas ee Gobolka Hunan Micomme waxay cagta saartay magaalada Hunan waxayna aaday adduunka. Intii lagu gudajiray kobcinta shirkada, waxay heshay daryeelka hogaamiyaasha iyo khabiirada dhamaan heerarka. Si aad u sii caawiso ...